Maxamed Bin Salmaan Oo Safaro Qarsoodi Ah Ku Tegey Israel | Dhaymoole News
Maxamed Bin Salmaan Oo Safaro Qarsoodi Ah Ku Tegey Israel
October 8, 2020 - Written by wariye999
Hargysa (Dhaymoole news)Sucuudiga: Maxamed Bin Salmaan Oo Safaro Qarsoodi Ah Ku Tegey Israel.
Dhax -sugaha Boqortooyada Sacuudiga, Maxamed Bin Salmaan, ayaa dhawaanahan dhowr jeer booqasho ku tagay Israa’iil, sida ay tabiyeen warbaahinta Bariga Dhexe.
Dadka indhaindheeya xaaladda gobolkaas ayaa aaminsan in xiriir qarsoodi ah uu horay uga dhaxeeyay Sacuudiga iyo Israa’iil, laakiin ilaa hadda ma jiraan safarro la xaqiijiyay ilaa hadda.
Warka ku saabsan Booqashooyinka qarsoodiga ah ee Maxamed Bin Salmaan waxaa laga shaaciyay Al Mayadeen TV, oo la hadlay saraakiil ka tirsan laamaha amniga Israa’iil.
Hase yeeshee lama magacaabin saraakiisha reer Israa’iil ee telefishinka laga warrayystay.
“Warar la xidhiidha arrimaha dibadda ayaa sheegay in Maxamed Bin Salmaan uu ku istareexay qorraxda magaalada Tel Avid, dhowr jeer,” ayuu telefishinka ku yiri sarkaal horay uga tirsanaa hay’adda amniga Israa’iil ee lagu magacaabo Shin Bet.
Warbaahinta Iran ayaa sidoo kale aad u hadal heysa sheekadan.
Sacuudiga ayaa lagu yaqaannaa in uusan Israa’iil u dhaleeceynin sida ay u dhaliilaan Iiraan iyo Turkiga.
Maxamed Bin Salmaan ayaa loo arkaa inuu daaha-dabadiisa a ka maamulo Boqortooyada Sacuudiga
Xigashada Sawirka, Reuters Qoraalka sawirka, Waxaa loo arkaa Maxamed Bin Salmaan inuu yahay ninka wakhtigan ugu awoodda badan Sacuudiga
Dagaalkii uu ku qaaday dalka dariska la ah ee Yemen, kaasoo sababay xadgudubyo waaweyn oo bani’aadannimo.
Inuu billaabay muranka siyaasadeed ee Qadar iyo Sucuudiga, oo kala qeybiyay midnimadii golaha iskaashiga khaliijka ee (GCC).
Inuu xoojiyay howlgalka adag ee ka dhanka ah dadka ka soo horjeeda siyaasadda Sucuudiga.
Xigashada Sawirka, Reuters Qoraalka sawirka, Hoteelkan oo ah mid loogu tala galay raaxada waxaa bilooyin ku xirnaa amiirro uu Maxamed Bin Salmaan xarigooda amray
Xigashada Sawirka, Reuters Qoraalka sawirka, Amiir Al Waliid bin Talaal wuxuu ka mid yahay dadka fara ku tiriska ah ee dunida ugu hodansan, sawirkanna waxaa laga qaaday isagoo ku xiran hotelka Ritz Carlton.
Boqorka cusub ayaa si deg deg ah u sameeyay labo go’aan oo ay la yaabeen dadka kormeera xaaladda maamulka boqortooyada, ka dib markii uu wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugaha ugu sokeeya ee taajka ahna wasiirka gaashaandhigga, halka wiilka uu adeerka u yahay ee Maxamed Bin Nayef uu ka dhigay ku xigeenka dhaxal sugaha boqortooyada.
Maxamed Bin Nayef ayaa markaas ahaa qofka xiga ee mudnaanta ku leh taajka.
Warqadda lagu qeexay go’aannadaas ayaa noqotay tii ugu horreysay ee xilka dhaxal sugaha boqortooyada loogu kala wareejiyo wiilashada uu awoowga u yahay Ibnu Sacuud, oo ah ninkii aasaasay boqortooyada.